Interior design - isikhathi obucayi yokudala, ikakhulukazi uma uwathanda ezihlukahlukene, futhi ngezikhathi ungahleli indlu yakhe ibe permutation futhi uyibuyekeza. Aludingi nje kuphela umsebenzi umcabango, kodwa futhi izindleko sina ezingokwenyama nezezinto ezibonakalayo. Nokho, ungagcina bese, uma imininingwane ethile ukuthi zilawule.
Ngokwesibonelo, amakhethini. Bathatha umbala lodonga futhi ifenisha. Futhi kukhona ezintathu ongakhetha yilezi: ukuthenga ezintsha esitolo, thunga oda (kodwa kuyabiza) noma ungazenza ukuchitha kuphela impahla yayo nezinto zokuhlobisa. Yiqiniso, uma indlu has a umshini bese wenza abangane nalo!
Ngakho, indlela thunga izilenge? Ngaphambi kokuthi uqale inqubo, unqume onjani amakhethini udinga: Roman, evamile, nge lambrequins, ekhishini noma egumbini lokuphumula, noma mhlawumbe egumbini lezingane? Nge efekethisiwe, izicelo noma zabuna ezimnandi zakudala? Lo mbuzo inquma encike kuyo, kanye izesekeli, futhi uhlobo ukuthi kuwumphumela ukubekwa ngeke aphinde Indwangu ukusetshenziswa.
Isitayela izilenge kufanele kuvumelane kulo uphahla. Ngokuvamile lokhu kuhilelani nokubuyekeza ukuthengwa kwelinye. Ngakho-ke, ukukhetha uhlobo cornice - udonga noma ophahleni. Linganisa ubukhulu ewindini, ungakwazi ukuthenga onqenqemeni kwesokudla. Futhi, ukuqondiswa nguye, cabanga indlela thunga amakhethini, ukuthenga izinto, ukwenza isibonelo ngokwakho noma khetha eyodwa efanelekayo.
Ukusebenza nge Amaphethini
Lapho ukusebenza ngamaphetheni kakhulu nzima - ukubaqonda. Ungakwazi uthintane nabangani noma ukucinga video tutorials. Uma ulwazi sokuqala ukusika futhi abathungela une - ke umbuzo indlela thunga amakhethini, ngeke kube yinkinga.
Ukuhlaziya Amaphethini ukufunda imibono ngokucophelela. Kukhona kungase kubonise ukusetshenziswa silinganisiwe kwezicubu iseluleko sendlela hlanganisa womfanekiso ke, uma ohlangothini front akuyona okuyisidina. Qaphela: impahla azothatha isikhathi eside kuleli cala.
Ukwenza izilinganiso kufanele futhi ngokucophelela nangokucophelela. Uma uhlose ukuba ukuhlobisa lambrequins iwindi, ububanzi kufanele abale ubude cornice. Ubude kufanele singadluli eyodwa nane ukuphakama egumbini, kungenjalo egumbini kuyoba emnyama kancane.
Esigabeni esilandelayo indlela thunga amakhethini, - ukwenza iphetheni imikhiqizo yabo esizayo injalo zemvelo. Ngenxa yalezi zinjongo, kuhambisana kahle labo wallpapers, okuyinto salungiswa. Iphethini izici ngokuhambisana nale Ubukhulu, nge izibonelelo izicubu njll Futhi ephepheni, dweba indaba emfushane ka yini okufanele uphumelele.
Esikhathini esitolo ukuthenga!
Ukuya lesitolo indwangu, ubambe iphethini futhi indaba emfushane. At the site, uthintane umthengisi mayelana ukuthungwa impahla - kungaba ngcono ukubheka: usilika esindayo noma ukukhanya, velvet, nokunye. Inombolo kuhle ukumkhumula isitokwe, ikakhulukazi uma namanje ungaqiniseki ukuthi thunga izilenge yena. Ngaphandle Indwangu, intambo kufanele uthenge umbala kwesokudla, siziqhathanise ngentambo - I-namotok, wokulinganisa, izikhonkwane, sikelo, isentimitha nokunye, kungase kudingeke wena. Leteyipu yokuqedela futhi eluka Curtain, nge eyelets, inlay etshekile futhi interlining, Velcro, ngawo izilenge anamekwe iphumele ophahleni, kanye izingwegwe, izintambo , nezinye izesekeli.
Isinyathelo esibaluleke kakhulu kule ndaba 'njengoba Sew kakhulu izilenge "is ukusika ukwaziswa. Zonke izingxenye ukuphuma ngosuku olulodwa, hhayi ukuyeka. Cutting kwenziwa enkulu futhi okuqinile, okungcono phansi. Dweba zonke imigqa ohlangothini front ukuze singathwesi ulahleke sibalo. Ngasinye ugobe imininingwane prishpilivayut pin iphethini izingcezu ukuze uqonde ukuthi uyobheka umphumela, futhi ungakhohlwa lutho. Izinsalela iphethini sokulandela ku indwangu ngobunono nangokunembile, njalo isabelo umphetho. Indwangu kungenziwa ukusika kuphela uma okungukuthi ngokuphelele ujenga by yonke imininingwane zinakekelwe.
Sahlala phansi typewriter
Indlela thunga izilenge ngokwayo? Omunye izigaba eziyinhloko - shanela "ukuphila" yonke imininingwane, futhi ukulandelana efanayo, okuyinto Kunconywa ku amanothi iphethini. Kungcono ulandele ngokulandelana: Baste izingcezu ezimbili noma ezintathu, eshelelayo kubo sostrochili. Bese uyaziveza intambo-Nous, futhi yensimbi - futhi ukuthatha esilandelayo.
Isenzibude mbumbulu kangcono kancane, ngakho musa gxuma emigqeni futhi kwahamba kahle. Kungenjalo kufanele unpick konke, hhayi nje kuphela lo msebenzi, kodwa futhi bonakalise impahla.
Ukuqoqa "kwesihenqo umklami" kulungile kakhulu, ngokuphina umkhiqizo osuphelile nge izikhonkwane ekhaphethini obondeni. Khona-ke ungakwazi ukuqonda, ukuthi wenzani futhi lapho kudingeka alungise.
Lapho umsebenzi usuphelile, izilenge ekugcineni otglazhivayutsya, zihlubule. Uma into oyifundayo kancane engcolile, kufanele siyakazwe, impahla ezimanzi - bushelelezi. Ulenga amakhethini emafasiteleni, ungakwazi ukujabulela izithelo ngobuhlakani bakho!
Indlela elula yokwenza imicibisholo ukusuka kudabuke ngezandla
Crochet: izimbali elingaphakathi futhi izingubo
Topiary - Isihlahla injabulo elenziwe ngezandla zabo
Ipulazi Inyama: ukubuyekezwa. Indlela ukuhlukanisa inyama ekhaya ipulazi?
Lo mthandazo ukuze Phumula umphefumulo oshonile
Linux isifundo. Indlela ukususa Ubuntu
Indlela ukubuyisela akhawunti "Play Store" Uma ukhohlwa iphasiwedi yakho?